Namely rindrina biriky ny fifohazana Oganda Airlines
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao » Namely rindrina biriky ny fifohazana Oganda Airlines
Oktobra 2, 2015
Ireo fanjakana mpiara-miombon'antoka efatra ao amin'ny Projet integration pour les correaux corps (NCIP) - Oganda, Kenya, Rwanda, ary South Sudan - dia nahatsapa tamin'ny farany fa ny fiparitahan'ny zotram-piaramanidina ao amin'ny regi
Ireo fanjakana mpiara-miombon'antoka efatra ao amin'ny Tetikasa Fampidirana ny Havoana Avaratra (NCIP) - Oganda, Kenya, Rwanda, ary South Sudan - dia nahatsapa tamin'ny farany fa ny fiparitahan'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka any amin'ny faritra dia hitondra fako amin'ny loharanom-bola tsy ampy raha tsy fiaraha-miasa manoloana ny dia nasionaly tery saina, ny ankamaroan'ny olona manana ny fandaharam-potoanany manokana.
Vaovao mahafaly izany, noho izany, rehefa vita ny fivoriana farany nataon'ny firenena NCIP tany Kenya dia nanomboka nipoitra ny fampahalalana fa indrindra ny Sodana atsimo - na dia tsy mpikambana ao amin'ny Vondron'olona Afrikana Atsinanana aza fa ampahany amin'ny vondrona NCIP - ary angamba bebe kokoa Oganda tsy amin'ahiahy, niditra an-tsambo ary nanaiky hampiroborobo ny RwandAir sy Kenya Airways hanomezana izay ilain'ny fitsangatsanganana an'habakabaka avy amin'ny olom-pireneny avy.
Ny birao ao amin'ny biraom-pirenena misahana ny fanamoriana fiaramanidina dia nomena andraikitra hamorona faritra iray ho an'ny firenena efatra, manomana am-pahombiazana ny lalana ho an'ny RwandAir sy Kenya Airways - Oganda sy Sudan atsimo dia tsy manana zotram-pirenena - hiasa tsy misy ferana manerana ny faritra.
RwandAir dia miasa sidina ankehitriny avy any Entebbe mankany / avy any Juba ary avy any Entebbe mankany / avy any Nairobi eo ambanin'ny zon'ny fahalalahana fahadimy. Ny kaompaniam-pirenena Rwandais manokana, rehefa avy nanambara ny baikon'izy ireo ho an'ny fiaramanidina vaovao vaovao efatra tokony halefa amin'ny taona ho avy, ao anatin'izany ny Airbus A330 roa, dia hanolotra ny Ogandey hisafidy hitety ny faritra sy ny kaontinanta amin'ny alàlan'i Kigali raha manitatra ireo toerana itodiana mankany Shina. , India, ary Eropa amin'ny taona ho avy. Mitovy amin'ny fiasan'ny Brussels Airlines sy KLM, izay samy manidina avy any amin'ny hubs-dry zareo avy any Kigali mankany Entebbe, i RwandAir dia afaka mandeha amin'ny sidina manerana an'i Entebbe ihany koa, miankina amin'ny isan'ny mpandeha sy ny de-boarding, na raha tsy izany dia manome feeder bebe kokoa sidina avy any Entebbe mankany Kigali.
Io fitsipika io ihany dia mihatra amin'ny sidina Kenya Airways amin'ny teny mitovy amin'ny Juba sy Entebbe, hampifandray ireo mpandeha avy amin'ireto teboka roa ireto ho ao amin'ny tambajotram-paritra, afrikanina ary intercontinental.
Fantatra fa ny fanokafana ny habakabaka dia mety ho voafetra ho an'ireo mpitatitra nasionaly tsirairay avy, miala amin'ny seranam-piaramanidina hafa, indrindra ireo tompona manokana any Kenya amin'ny fampitaovana izay tsy maintsy hifaninana ho toy ny kaompaniam-pitaterana fifamoivoizana maharitra.
Ny vondrona miasa amin'ny minisitra dia hanolotra ny zavatra hitany sy ny tolo-kevitr'izy ireo amin'ny fihaonambem-panjakana NCIP manaraka izay nahemotra noho ny filoham-pirenenan'i Afrika Atsinanana nanatrika ny fivorian'ny fivoriamben'ny Firenena Mikambana tao New York, ka nila nanemotra ny fivoriana an-tampon'ny Nairobi NCIP.
Andriamatoa Barry Kashambo, izay filohan'ny CASSOA teo aloha ary talen'ny faritra ho an'ny ICAO monina ao Nairobi, no voatonona fa nilaza fa ny hetsika toy izany dia nampidina ny vidin'ny vidim-piainana ary nampitombo ny isan'ny refy mampifandray ilay faritra.
Ny fifampiraharahana vaovao dia mety nanjary nahomby, raha toa ka ny mpanao lalàna Kenyan malaza indrindra dia voahazona mafy hatrany am-piandohan'ny ampahefatry ny taona 2016 ary avy eo manome ny mpandeha avy any Entebbe sy Juba miaraka amin'ny sidina fanampiny ampiasain'ny Kenya Airways sy RwandAir.
Niala tamin'io fivoarana io i Burundi, ilay firenena mifandray ratsy indrindra ao amin'ny Vondron'olona Afrikanina Atsinanana ary saika voahilikilika ihany koa noho ireo hetsika ara-politika farany teo, ary i Tanzania, izay nisafidy ny tsy hiditra amin'ny fiaraha-miasa haingana nataon'i Rwanda, Uganda, atsimo Sudan, sy Kenya. Aorian'izay ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka Tanzania dia tsy handray tombony amin'ireo fotoana fanampiny izay manakaiky ny faravodilanitra ankehitriny, mamela an'io firenena io hisaintsaina ny làlana vaovao hiroso taorian'ny nidiran'ny filoha vaovao taorian'ny fifidianana ho avy.
Ireo orinasam-pandraharahana fiaramanidina toy ny IATA ary mazava ho azy ny AFRAA, ny Fikambanam-piaramanidina afrikanina monina any Nairobi, dia nandrisika hatry ny ela ny fihevitry ny fiaraha-miasa akaiky kokoa fa tsy ny fizarazaran-tena tsy tapaka hisehoana ireo kaompaniam-pitondrana misimisy kokoa miseho izay manana fahaiza-mahatohitra ny fanerena mifaninana tsy ny Seranam-piaramanidina lova eoropeana fa indrindra ireo kaompaniam-piaramanidina mega mipoitra avy any amin'ny Helodrano sy avy any Torkia.
“Ny zavatra ilaintsika eto Afrika Atsinanana, raha ny tena izy manerana an'i Afrika, dia fifangaroana tsara eo amin'ireo kaompaniam-panompoana feno sy ireo kaompaniam-pitaterana lafo vidy. Ity farany dia manana, ary omeko anao ny Jambojet any Kenya ary i Fastjet any Tanzania ohatra, dia nitondra mpizahatany vaovao handeha amin'ny rivotra fa tsy hampiasa bus na lamasinina. Na izany aza, ny teo aloha dia hanana toerana iray ihany koa noho ny fifandraisana amin'ny alàlan'ny hubs-ny fa tsy ny fivezivezena mivantana. Raha misy zotram-piaramanidina efa misy sy miasa tsara toa an'i Kenya Airways sy RwandAir afaka omena fidirana feno mankany amin'ny tsena any Oganda sy South Sudan, dia handray soa ireo mpandeha toy ireo zotram-piaramanidina ireo. Ny zavatra tsy maintsy tandreman'ireo firenena anefa dia ny fetra napetraka amin'ny saran-dàlana mba hialana amin'ny vidin'ny tapakila azo trandrahana, satria izany dia hamono io fotokevitra io avy hatrany, ”hoy ny loharanom-baovao mahazatra avy any Nairobi izay nanda ny anarany hatrizay.
Delta Plus ve tsy mitovy amin'ny Delta Variant an'ny ...